अर्थतन्त्र खस्किंदै छ भन्ने आंकलनका कारण नेप्से घट्ने क्रम जारी, २३ अंकको गिरावट ! - Laltin Media
Home»सेयर बजार»अर्थतन्त्र खस्किंदै छ भन्ने आंकलनका कारण नेप्से घट्ने क्रम जारी, २३ अंकको गिरावट !
अर्थतन्त्र खस्किंदै छ भन्ने आंकलनका कारण नेप्से घट्ने क्रम जारी, २३ अंकको गिरावट !
By लाल्टिन डट कम April 6, 2022 Updated: April 6, 2022 No Comments3 Mins Read
आज बुधबार २३.३२ अंकले घटेर ०.९५ % गिरावटको साथ नेप्से २४२८.७५ अंकमा बन्द भएको छ। कारोबार भएका २२६ कम्पनीमध्ये ३३ कम्पनी उकालो लागेका छन्, १५६ कम्पनी ओरालो लागेका छन् र ६ कम्पनी स्थिर रहेका छन्।
कारोबार भएका तेह्र उप-समुहमध्ये १० उप-समुहको सेयर मूल्य ओरालो लागेका छन् भने ३ उप-समुहको सेयर मूल्य उकालो लागेका छन् ।
बजार पुँजीकरण घटेर ३४ खर्ब ४८ अर्ब पुगेको छ।
NEPSE Daily Update: April 6, 2022
आज बोलिन्जर ब्याण्डको अपर र लोवर ब्याण्डको अन्तर बढेको विश्लेषणले देखाउँछ (आजको फरकः२७७) जसले बजारमा भोलाटाइलिटी बढेको इङ्गित गर्दछ। बजार आज लोवर ब्याण्ड भन्दा तल २४२८ मा बन्द भएको छ। आज पनि बजारमा बिक्री चाप बढेको देखिन्छ ।
मुभिङ एभरेज कन्भर्जेन्स डाइभर्जेन्स विश्लेषणले एमएसिडि लाइन जिरो लाइन भन्दा -५५ मा आएको देखिन्छ। हिस्टोग्राम नेगेटिभ -११ मा आएको छ। एमएसिडी लाइनले माथिबाट तल तिर सिग्नल लाइनलाइ क्रस गरेर तल गएको देखिएको छ। सिग्नल लाइन जिरो लाइन भन्दा तल -४३ आएको छ। समग्र मुभिङ्ग एभरेजलाई हेर्दा बजारमा आज बिक्री बढी भएको देखिन्छ।
डाइरेक्सनल मुभमेन्ट इन्डिकेटरले आज +१४ डिएमआई लाइन निरन्तर तलतिर लागिरहेको छ भने -१४ डिएमआई भने माथि फर्किएको छ। सिग्नल लाइन +१४डिएमआई लाइन लाइ क्रस गरेर माथि तिर निरन्तर जाँदै छ जसले ट्रेन्ड निरन्तर हुन सक्ने जनाउँछ । -१४ डिएमआई लाईन तल बाट माथि फर्किएको देखिन्छ जसले बिक्री बढेको बुझ्न सकिन्छ।
क्युमुलेटिभ एडी लाइन -३९१७ देखि घटेर -४०४० मा आएको छ। नेप्सेको कुल भोल्युम ३७५६८९६ रहेको छ जुन २१ दिन मुभिङ एभरेज भोल्युम(४४०६३३८) को ८५ प्रतिशत देखिएको छ।
नेप्से आज लोवर ब्याण्ड भन्दा तल २४२८ मा क्लोज भएको छ। एमएसिडी लाइन जिरो लाइन भन्दा तल -५५ मा आएको छ र सिग्नल लाईन पनि जिरो लाइन तल -४३ मा देखिएको छ भने हिस्टोग्राम नेगेटिभ -११ मा पुगेको छ जसले बजारमा बिक्री बढेको देखिन्छ।
-१४ डिएमआई लाइन माथि फर्किएको छ भने +१४ डिएमआई लाईन तल तिर लागेको छ र एडिएक्स लाइन + १४ डीएमआइ लाइनलाइ क्रस गरेर माथितिर निरन्तर लागिरहेको छ जसले ट्रेन्ड निरन्तर हुनसक्ने जस्तो देखिएको छ। आज पनि बजारमा बिक्रीकर्ताको मोमेन्टम बढेको सङ्केत गर्छ। आरएसआइ आज ३० बाट घटेर २८.५ मा पुगेको छ आरएसआइको मोमेन्टम घटेको जनाउँछ र बजारमा ओभर सोल्ड जोनमा पुगेको बुझ्न सकिन्छ।
#अर्थतन्त्र खस्किंदै छ भन्ने आंकलनका कारण नेप्से घट्ने क्रम जारी २३ अंकको गिरावट !